म पत्रकार: समाचार ‘इन डेप्थ’ ~ dharma adhikari : journalism, media and communications
म पत्रकार: समाचार ‘इन डेप्थ’
साहित्यकार बन्ने सपना साँचेर काठमाडौं पसेका धर्म अधिकारी शिक्षक हुँदै कालान्तरमा पत्रकार भए । गहिराइमा पुगेर विषयको चुरो पत्ता लगाउने पत्रकारमा आफ्नो नाम दर्ता गरे । तर धर्मलाई ‘साधना’ मासिकले लामो समय नेपालमै रोकिरहन सकेन । अध्ययन, अनुसन्धानमा रुचि थियो । अमेरिका गए । अमेरिकामा पढ्ने र पढाउने उनको दैनिकी भयो । भारत मणीपुरमा बस्दा देशको माया र पहिचानको भोकको अनुभव गरेका धर्म अमेरिकामा पनि बस्न सकेनन् । नेपाल फर्किए । मिडिया रिसर्चमा लागे । तर आशातीतः परिणाम आउने नदेखेपछि उनी लागे चीनतिर । चीनमा पत्रकारिताको बाह्रखरी पढाइरहेका धर्मलाई नेपाल आएको छेको पारेर हामीले बिहीबार अनामनगरमा भेट्यौं । नेपाल–अमेरिका–नेपाल हुँदै चीन पुगेका धर्मको ऊर्जामा अहिले पनि रत्तिभर कमी आएको छैन । उस्तै जोश र जाँगरमा उनले आफ्नो अनुभव साटे ।
बुवा–आमा कामको खोजीमा भारत मणीपुर पुगेका थिए । धर्म (अधिकारी) उतै जन्मिए । पठनपाठन त्यहीँ सुरु भयो । अर्काकोे देश, अर्काकै रजाइँ । साथीहरुले हेप्थे, कुट्थे । फिरन्ते भन्थे । धर्मलाई चित्त दुख्थ्यो । तर पनि बस्नैपथ्र्यो । धर्म कक्षा नौमा पढ्दै थिए । जातीय द्वन्द्व सुरु भयो । मणीपुर छोड्नुपर्ने भयो । बुवा–आमा नेपाल फर्किए । तर धर्म भने पढाइ बिग्रिने भएकाले उतै बस्नु पर्ने भयो ।
भनेको मान्नैपर्‍यो । आफन्तकोमा बसेर पढ्न थाले । जन्म दिने आमा–बुवा नै नभएपछि मणीपुर उनका लागि शून्यशून्य भयो । एक्लोपनले लखेट्न थाल्यो । सकेनन् धर्म एक्लै बस्न । नेपाल आए । विर्तामोडमा कक्षा नौमा भर्ना भए ।
मणीपुरमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेका, नेपालमा पढ्नुपर्ने नेपालीमा । उनलाई सकस भयो । हमेसा एउटै प्रश्नले लखेटिरहन्थ्यो, ‘मैले एसएलसी पनि पास नगर्ने भएँ ।’
नेपाली नजानेको प्रतिबिम्ब उनको अनुहारमा देखेका उनका नेपाली शिक्षकले भने, “तिमीलाई कविता लेख्नमा रुचि छ । त्यसैले कविता लेख, भाषा राम्रो हुन्छ ।”
धर्म कविता यति धेरै लेख्न थाले, सिङ्गै कापी कविताले भर्थे । “कति धेरै मेहनत गरेछु मैले । मैले नौ कक्षाको परीक्षामा नेपालीमा सबैलाई टपेँ ।”
धर्मले साहित्यप्रतिको आफ्नो झुकाव सम्झिए । विलियम सेक्सपियर, कवि वडर््सवर्थ उनलाई मन पर्ने साहित्यकार थिए । भेटेजति साहित्यका पुस्तक पढ्थे । त्यसले उनलाई साहित्यप्रति रुचिमात्रै जगाएन । भविष्यको बाटो कोर्ने निर्णय लिन पनि सहयोग गर्‍यो । भारतमा गैरनागरिक भएर बस्दाको छटपटी र पहिचानको भोकले पनि होला उनले निर्णय लिए– ठूलो भएर ठूलो साहित्यकार बन्छु । ताकि जसले पनि मलाई चिनून् । देशविदेशमा मेरो ख्याति होस् ।
नेपालमा आएपछि भूपी शेरचन र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविताले उनलाई तान्यो । देवकोटाका निबन्धले उनको मथिङ्गल हल्लाइरह्यो ।
०४१ सालमा एसएलसी दिए । ०४२ मा काठमाडौं आए । उनलाई रुचि थिएन, तर साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने दबाब थियो । कति काम अरुकै सल्लाह, सुझाव र सामाजिक मर्यादाका लागि परिवन्दमा परेर गरिँदोरहेछ भन्ने उनले त्यहीबेला अनुभूत गरे । अमृत साइन्स कलेज साइन्सका लागि ख्याति बटुलेको कलेज थियो । तर धर्म भर्ना भए त्रिचन्द्रमा ।
“देवकोटाको एउटा कथामा उहाँले त्रिचन्द्र कलेज अगाडिको रुखको बयान गर्नुभएको थियो । म त्यो रुख खोज्दै त्यहाँ पुगेँ । तर त्यो रुख त्यहाँ थिएन । किनकि, म निकै ढिलो आएको थिएँ काठमाडौं,” कहानी सुनाउँछन् धर्म, “रुख नभए पनि म देवकोटाले पढाएको कलेजमा पढ्छु भनेर त्यहीँ भर्ना भएँ । अनौठो कुरा मैले देवकोटालाई सपनामा देखेँ । दुईपटक उहाँले मलाई सपनामा भन्नुभयो– तिमी राम्रोसँग पढ । तिमीले चाहेको कुरा गर्न सक्छौ ।”
एक वर्ष पढेपछि धर्मलाई लाग्यो साइन्स मेरा लागि होइन । केही दिन रत्नराज्यलक्ष्मी कलेजमा पत्रकारिताको कक्षा पनि लिए, तर त्यहाँ पनि रमाउन सकेनन् । वर्ष सकिन लागेपछि उनले त्रिविबाट प्राइभेट आईए प्रथम वर्षको परीक्षा दिए । स्नातक उनले देवकोटाले पढाएकै कलेजमा पढे ।
घरबाट खर्चपानी आउँदैनथ्यो । आईए पढ्दादेखि नै काम गरेर खर्च जोहो गर्थे । काठमाडौंमा बस्न, खान र पढ्न धर्म ट्युसन पढाएर खर्चको जोहो गर्थे ।
पढ्नु र पढाउनुका अलावा उनी पत्रपत्रिकामा कविता र फिचरहरु लेख्थे । ‘गोरखापत्र’मा कविता र ‘काठमाडौं रिभ्यु’मा फिचरहरु लेख्न थालेका थिए । पर्यटनसम्बन्धी फिचर लेखेका धर्म आफ्नो नामबारे पनि बोल्छन् । उनको पूरा नाम धर्मानन्द अधिकारी । उनलाई त्यो नाम अलि लामोजस्तो लाग्यो, बाइलाइनका लागि । त्यसैले उनले धर्ममात्रै लेखे । सुरुआती दिनमा फ्रिलान्सर भएर लेख्दा उनले बाइलाइन धर्म दिए ।
धर्मले स्नातक तहमा त्रिवि टप गरेको पनि सुनाए । जीजीविषा धान्न त्यति सहज थिएन । हातमुख जोर्न काम गर्नैपथ्र्यो । त्यसैले उनी पढाइरहेका थिए । होम ट्युसनकै क्रमममा उनी काष्टमण्डपछेउको एउटा घरमा पुगे । घर थियो पुष्करलाल श्रेष्ठको । दिरेकलाल श्रेष्ठलगायतलाई घरमै गएर पढाइरहेका थिए । बाइलाइनको लोभ हो या शोधको रहर उनलाई लेख्न रहर लाग्थ्यो । लोभ र रहरको परिणाम उनी लेख्थे । पत्रपत्रिकामा छापिन्थ्यो । पुष्करलालले देखेछन् ।
पुष्करलाले धर्मलाई भने, “पत्रिकामा आउनुस् सँगै काम गरौं ।” अङ्ग्रेजी पत्रिका निकाल्ने सोचमा थिए श्रेष्ठ । ‘समाचारपत्र’ र ‘द नेसन’ दर्ता हुँदा ‘द नेसन’ धर्मको नाममा दर्ता भयो । ‘द नेसन’को सम्पादक धर्म हुने निर्णय भयो ।
‘द नेसन’ सुरु नहुञ्जेल ‘साधना’को सम्पादकको जिम्मेवारी धर्मलाई दिने श्रेष्ठले निर्णय गरे ।
जगदीश पोखरेल ‘राइजिङ नेपाल’मा थिए । उनले आऊ, यहीँ काम गरौं भनिरहेका थिए । अङ्ग्रेजी राम्रो भएका धर्मलाई नेपाली भाषामा अब्बल बन्नु थियो । त्यसका लागि उनले ‘साधना’ नै उचित ठाने ।
पशुपतिमा लासको व्यापार
४० को दशकको अन्त्यमा ‘साधना’बाट व्यावसायिक पत्रकारिताको यात्रा सुरु गरेका उनले ‘साधना’लाई नयाँ उचाई दिए । गहिराइमा पुगेर समाचार खोजे । ‘कभरस्टोरी’ गरे । उनले खोजेका समाचारले ‘साधना’लाई नयाँ उचाईमात्रै दिएन, धर्मलाई पनि नाम र इज्जत दुवै दियो ।
आफूले गरेका केही समाचार सम्झिन हामीले उनलाई आग्रह गर्‍यौं । असङ्ख्य समाचारका बीचबाट उनले चारवटा स्टोरी सम्झिए । समाचारको शीर्षक ठ्याक्कै उनलाई याद छैन । तर समाचारको एङ्गल भुलेका छैनन् ।
१. पशुपतिमा लासको व्यापार
२. खाते नानीहरुको कथा
३. चिहान खन्नेहरुको कथा
जिन्दगी प्रयोग हो भन्ने धर्मलाई पत्रकारितामा पनि ‘प्रयोग’ गर्नु थियो । नयाँ केही गर्नु थियो, सुरु गरे ।
‘पशुपतिमा लासको व्यापार’ भइरहेको धेरैलाई थाहा थियो । पशुपतिनाथ मन्दिरलाई चढाएको भेटी र दान गरेका सुन–चाँदी हिनामिना भइरहेको छ भन्ने गाइँगुइँ थियो । लास पोल्ने दाउरामा भइरहेको कमिसनलाई भ्रष्टाचार धेरैले भन्थे, तर समाचार आएको थिएन । यसमै लेख्छु भन्ने सोचे धर्मले । “आफैं फिल्डमा गएर आफ्नै आँखाले देख्नुपर्छ । डिटेल उतार्नुपर्छ । पाठकले पढ्दा त्यसको तस्बिर उसको दिमागमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । त्यसैले म आफैं एकसाता पशुपतिमा राति १२/१ बजेम्म बसेर त्यहाँको बस्तुस्थिति हेरेँ,” धर्म भन्छन्, “पशुपतिको मूलभट्टको त्यो बेलासम्म कतै पनि अन्तरवार्ता आएको थाहा थिएन । तर मलाई गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । राजासँग सीधै पहुँच हुने भट्टले अन्तरवार्ता दिन्छन् होला र ? त्यसैले म त्रिवि सोसोलोजीको विद्यार्थी बनेर मूलभट्टसँग पुगेँ । उहाँसँग लामो कुराकानी गरेँ । उहाँले धेरै कुरा खुलेर गर्नुभयो । मैले त्यसलाई ‘बक्स इन्टरभ्यु’ बनाएर राखेँ ।”
विद्यार्थी भनेर मूलभट्टले धर्मसँग खुलेर कुरा गरे । तर धर्म विद्यार्थीको छद्म भेषमा पत्रकार थिए । त्यसलाई समाचार सामग्री बनाए ।
पशुपति आर्यघाटमा दैनिक दर्जनौं शव जलाउन कति लाग्छ दाउरा ? त्यसको मूल्य कति ? आउँछ कति ? आयात र खपतको तुलना गरे । अनियमितताको ‘इन्फोग्राफ’ तयार भयो । निकै लामो कभरस्टोरी छापियो ।
विस्तृतमा छापिएको समाचार पाठकले मन पराए । त्यो बेलाका साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले त्यही समाचार बिनास्रोत छापे । धर्म सुनाउँछन्, “त्यसपछि हो पशुपतिनाथ पनि समाचारको विषय हो भनेर पत्रकारले फलो गर्न थालेको ।”
‘खाते’ शब्द प्रयोग गर्दा...
सडक बालबालिकाका बारेमा धर्मलाई स्टोरी गर्न मन लाग्यो । तर सहज थिएन । बोल्न नमान्ने, बोलिहाले पनि गाली गर्ने । कसरी बोल्न लगाउने ? उनीहरुसँगै घुलमिल भए ।
अबेर साँझसम्म उनीहरुसँगै बसे । उनीहरुका अड्डामा गए । दाउरा बालेर तापे । एकसाता लगाएर उनीहरुको कथा सङ्कलन गरे । पृष्ठभूमि । सडकसम्म आइपुग्नुको कारण । उनीहरुले भोग्नुपर्ने समस्या र भोगिरहेको जीवन खोजे । त्यसपछि उनलाई चाहियो सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले उनीहरुलाई गरेको सहयोग, उनीहरुलाई बाहिर ल्याउन भएको प्रयास तथा लगानीबारे तथ्य ।
“त्यो बेला अहिलेको जस्तो सडक बालबालिका भन्ने शब्द प्रयोग हुन थालको थिएन । ‘खाते’ भनिन्थ्यो । त्यसैले ‘खाते नानीहरु’ भनेर नै लखिएको थियो,” उनी भन्छन्, “पछि त्यही स्टोरीलाई लिएर मार्टिन चौतारीले रिभ्यु लेख्यो । ‘खाते’ भन्ने शब्द कहाँबाट आयो भन्नेदेखि परिभाषासमेत उल्लेख गरिएको छ । ग्लोबल ट्रेन्ड के छ, त्यसमा समेटिएको छ ।”
समलिङ्गीको त्यो समाचार
सम्पादक थिए धर्म । सधैं आफूले मात्रै गरेर भ्याउन सम्भव थिएन । त्यसैले रिपोर्टरहरुलाई ‘असाइन’ गराउँथे । प्रजातन्त्र भर्खर आएको थियो । समाज खुल्ला हुँदै थियो । आफ्नो अधिकारका लागि सीमान्तकृत समुदायहरु आफ्नो आवाज मुखरित गर्न खोजिरहेका थिए ।
त्यही समय पश्चिमा मुलुकमा मौलाएको समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गी समुदाय नेपालमा पनि देखिन थाल्यो । ‘ब्ल्यु डाइमन्ड सोसाइटी’ नामक संस्था नै उनीहरुले खडा गरेर सङ्गठित हुन थालेका थिए । धर्मले रिपोर्टरलाई असाइन गराए ।
समाजमा भर्खर खुल्दै गरेका समलिङ्गीहरु आफ्नोबारे सञ्चारमाध्यममा बोल्नु त के पत्रकारको छेउ पनि पर्दैनथिए । तर समाचारका लागि आवश्यक जानकारी चाहिएकै थियो । उनले खटाएका रिपोर्टर रातरात ठमेल, रत्नपार्क र लाजिम्पाट गए । समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गीसँग कुरा गरे । समाचारका लागि आवश्यक सामग्री पुगेपछि उनले रिपोर्टरलाई समाचार लेखाए ।
बिल्कुल नयाँ थियो समाचार । धेरैले नदेखेको मात्रै होइन नसुनेको विषय थियो त्यो । समाचार प्रकाशन भएपछि सयौंको सङ्ख्यामा समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी साधनाको कार्यालय घेराउ गर्न आए । अफिस तोडफोडमै उत्रिए । “मलाई मार्छु र काट्छु भनेर झम्टिए,” धर्म सम्झिन्छन्, “धन्न प्रहरी आइपुग्यो र मेरो ज्यान जोगियो त्यस दिन ।”
चिहान खन्नेको समाचार
पूर्वी नेपालमा जनजाति समुदायको मृत्युपछि शव जलाउने चलन छैन । मृत्युअगाडि उसले इच्छाएको ठाउँमा चिहान बनाएर गाड्ने चलन थियो ।
समाचार ‘एक्सक्लुसिभ’ हुन्थ्यो । तर थुप्रै चुनौती थिए । पहिलो, त्यो समाचार खोज्नका लागि पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला पुग्नुपथ्र्यो । दोस्रो, त्यसका लागि समय र पैसा निकै खर्च हुनेवाला थियो । तेस्रो, समाचार छापिएपछि जनजाति समुदाय आक्रोशित हुने सम्भावना । आक्रोशको परिणाम जस्तो पनि हुन सक्छ भनेर त्यसलाई सामना गर्न मानसिक र शारीरिक रुपमा तयार हुनुपथ्र्यो ।
समाचार, शव जलाइँदैन गाडिन्छ भन्ने थिएन । चिहान खनेर चिहानमा रहेका सुन, चाँदी तथा पैसा निकालिन्छ भन्ने थियो । यसरी चिहान खन्नेमा मृतकका परिवारका सदस्यदेखि आफन्त पनि हुने गरेको तथ्य थियो । रातको चकमन्न र अँध्यारोमा यस्ता क्रियाकलाप भइरहेको भन्ने सूचना थियो ।
सूचनाले लोभ्यायो ‘साधना’लाई । प्रधानसम्पादक तथा प्रकाशक पुष्करलाल श्रेष्ठ हेलिकप्टर चार्टर गरेर रिपोर्टिङका लागि रिपोर्टर पठाउन तयार भए । “पुष्करजीले हेलिकप्टर चार्टर गरेर रिपोर्टिङका लागि रिपोर्टरलाई भोजपुर पठाउनुभयो ।
रिपोर्टरले समाचार ल्याए । छापियो पनि,” उनी भन्छन्, “स्टोरी छापिएपछि तहल्का मच्चियो । काठमाडौंमा भएका जनजातिहरुले जुलुस निकाले । हामीले त्यस्तो गरेकै छैन । हाम्रो भावनामाथि ठेस पुर्‍याउने काम भयो भन्न थाले । त्यतिमात्रै होइन, उनीहरुले त्यो समाचारको खण्डन गर्न न्युजलेटर नै प्रकाशन गरे ।”
समाचार लेख्ने रिपोर्टर केही दिनपछि आफूले लेखेको समाचारको खण्डन गर्दै छापिएको न्युजलेटर बोकेर कार्यालय आए । खण्डनसहित ‘साधना’को अर्को अङ्कमा त्यही स्टोरी छापिएको धर्म सुनाउँछन् ।
उमेर युवा थियो । जोश–जाँगर थियो । केही नयाँ गरौं भन्ने भावना थियो । साथीहरुको साथ थियो । धर्मलाई लाग्यो, “यति पपुलर म्यागेजिन अङ्ग्रेजीमा किन प्रकाशन नगर्ने ? दुई अङ्क निस्कियो पनि । भलै व्यवस्थापनले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । विडम्बना ! बन्द भयो ।
ढुङ्गो खाए पचाउन सक्छु, चट्टानी पहाड एक्लै फोड्न सक्छु भन्ने युवा जोश सेलाएको थिएन । पत्रकारिताबारे अध्ययन–अनुसन्धानको लगाव र झुकाव थियो । साधनाको दुई अङ्क उनले सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमात्रै समेटेर निकाले । कभरस्टोरी आफैं लेखे । पत्रकारहरुसँग भेटघाट गरे । अन्तरवार्ता लिए ।
“पत्रकारिता पेशा कस्तो ? हामी सबैलाई थाहा छ । काट्न नभ्याएको लामो दारी र कालो ब्याग बोकेर दिनभरि करोडपति र अर्बपतिसँग सङ्गत ग¥यो । अबेर राति घर पुगेर भोकै सुत्नुपर्ने पेशाको चिरफार गरेँ,” उस्तै जोशिलो स्वर र हाउभाउमा धर्म सुनाउँछन्, “धरान र पोखरामा रिसर्च गराएँ । रिसर्चबाट प्राप्त डेटा राखेँ । किन त्यो गरेँ मलाई थाहा थिएन त्यो समय । मात्रै रहरले गरेँ । तर अहिले थाहा पाएँ पत्रकारिताप्रतिको झुकाव पो रहेछ त्यो !”
अमेरिका र चीनमा...
एकै ठाउँमा लामो समय बस्न सहज नलाग्ने । रिसर्च गर्दै हिँड्न मन लाग्ने । तर पत्रकारितामा सधैं त्यो सम्भव थिएन । त्यसमा पनि दिनभरि अर्बपतिको सङ्गत रातभरि सय रुपैयाँको अभाव झेल्नुपर्ने पेशा । सय र हजारकै अभाव त धर्मले भोग्नुपरेन । यद्यपि, उनले गरेको श्रमको उचित मूल्य नेपाली पत्रकारिताले उनलाई दिन सक्दैनथ्यो । फलतः छ वर्षको ‘साधना’को यात्रापछि धर्मले अमेरिकाको टिकट काटे ।
पत्रकारिताको अभ्यासमा थिए । तर अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरे पनि पत्रकारिताको एकेडेमिक अध्ययन थिएन । त्यसको अभाव उनको कलममा नदेखिए पनि पढ्ने रहर थियो । त्यसैले उनले फुलब्राइट स्कलरसिपका लागि प्रयास गरेका थिए ।
‘मिजौरी स्कुल अफ जर्नालिजम’मा पढेका उनले चाहेको भए अमेरिकाका मिडियामा गएर एक वर्ष काम गर्न पाउँथे । चाहे त्यो ‘न्युयोर्क टाइम्स’ नै किन नहोस् । गएनन् । धर्मलाई अझै पढ्न मन थियो । पीएचडीमा आवेदन दिए । पीएचडी गर्दागर्दै पढाउन सुरु गरे । आफैंले पढेको मिजौरीमा चार वर्ष पत्रकारिता पढाएका धर्मले ‘जर्जिया साउदर्न युनिभर्सिटी’मा तीन वर्ष अध्यापन गरे ।
पैसा राम्रो थियो । सम्मान पनि थियो । तर पनि आफ्नै देश फर्किए । नेपालको ठूला सञ्चारमाध्यमका मालिक र पत्रकारहरुलाई भेटे । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा केही नयाँ काम गरौं भन्ने आग्रह गरे । तर सम्भव भएन ।
भारतदत्त कोइरालालाई अध्यक्ष बनाएर ‘मिडिया फाउन्डेसन’ खोले । मिडिया रिसर्च गरे । ‘मिडिया गुफा’ उनकै आइडियामा सञ्चालन भएको कार्यक्रम थियो ।
अमेरिका बस्दा पनि उनी पत्रकारिताभन्दा टाढा रहन सकेनन् । कहिले उतैका पत्रिकामा त कहिले नेपालका पत्रिकामा लेख लेख्थे । नेपाल फर्किएर १० वर्ष नियमित स्तम्भ लेखे ।
परिवारको मूली । जिम्मेवारी उनकै काँधमा थियो । तीन जना छोराछोरी खुट्टा टेकाइदिनु थियो । जिम्मेवारीको भारीले किचेपछि उनी लागे चीनतिर ।
धर्म ‘सान्तोउ युनिभर्सिटी’मा पत्रकारिता पढाउँछन् अहिले । दुई वर्ष भयो चिनियाँलाई पत्रकारिताका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पढाउन थालेको ।
डिजिटल मिडियाका पारखी
देश–विदेश घुमे । पढे, पढाए । लेखे र लेखाए । अनुभव बटुले र कान्छो पुस्तासँग साटे । अनुभवले भन्यो– नेपाली मेहनती छौं । तर अर्थहीन मेहनत गरिरहेका छौं । आज गरेको मेहनतको उपलब्धि केही छैन भन्ने थाहा छ । तर पनि हामी गरिरहेका छौं । विदेशमा आज मैले गरेको मेहनतको परिणाम के र कति आउँछ भन्ने पहिला नै थाहा हुन्छ ।
अमेरिकामा पढ्दा शिक्षकले अनलाइन पत्रकारिताको एउटा कक्षा लिए । अनलाइन पत्रकारिताको पहुँचले उनलाई प्रभाव पार्‍यो । न घरघरमा वितरण गर्दै हिँड्नुपर्ने न त सडक, सवारी र भूगोल अवरोधक बन्ने । एचटीएमएल कोड चलाउन आउँथ्यो । त्यसैले अनलाइन सुरु गरेका थिए धर्मले । जुन नेपालमा ‘नेपालन्युज’पछिको दोस्रो डिजिटल पत्रिका थियो ।
“१२ वर्ष अनलाइन चलाएँ, जसमा मलाई गर्व छ । किनभने त्यो नेपालमा बिल्कुल नयाँ थियो,” धर्मले डिजिटल पत्रकारिताको प्रारम्भिक अनुभव सुनाए ।
“नेपालमा डिजिटल मिडिया भर्खर सुरु भएको थियो । नेपालन्युज डटकममात्रै थियो । सन् १९९९मा मैले न्युजलुकम्याग डटकम नामक अनलाइन चलाएँ । भलै, त्यो अहिलेको ब्लगजस्तो थियो,” धर्म सुनाउँछन्, “पछि ज्ञानेन्द्र शाहको शासन आएपछि मेरो अनलाइन ब्लक भयो । किनकि त्यसमा सबै समाचार राख्थेँ म । त्यसपछि मैले नेपालमनिटर डटकम भनेर अर्को अनलाइन चलाएँँ ।”
दरबार हत्याकाण्ड हुँदा धर्म अमेरिकामा थिए । अमेरिकाबाट उनले पलपलमा उक्त घटनाको अपडेट गर्थे ।
“साधनाले मलाई चिनायो, तर अनलाइनले मलाई आत्मसन्तुष्टि दियो,” उनले अन्तिममा भने ।
बाह्रखरी २०७६ श्रावण २५ शनिबार (10 August, 2019)
Blog Archive August 2019 (1) June 2019 (1) May 2019 (3) February 2019 (1) July 2017 (2) June 2017 (1) May 2017 (2) April 2017 (1) March 2017 (2) February 2017 (2) January 2017 (4) December 2016 (2) November 2016 (2) September 2016 (2) August 2016 (3) July 2016 (1) June 2016 (2) May 2016 (2) April 2016 (1) March 2016 (1) February 2016 (2) January 2016 (2) December 2015 (2) November 2015 (2) October 2015 (2) September 2015 (2) August 2015 (2) July 2015 (1) June 2015 (2) May 2015 (1) April 2015 (2) July 2014 (2) June 2014 (2) April 2014 (2) February 2014 (2) January 2014 (1) December 2013 (2) November 2013 (1) October 2013 (1) September 2013 (1) August 2013 (1) July 2013 (1) June 2013 (2) May 2013 (4) April 2013 (3) March 2013 (2) February 2013 (2) January 2013 (3) December 2012 (3) November 2012 (2) September 2012 (5) August 2012 (4) July 2012 (1) June 2012 (2) May 2012 (1) April 2012 (3) February 2012 (2) January 2012 (3) December 2011 (2) November 2011 (1) October 2011 (2) September 2011 (3) August 2011 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (2) April 2011 (2) March 2011 (2) February 2011 (2) January 2011 (2) December 2010 (1) November 2010 (1) October 2010 (1) August 2010 (2) July 2010 (1) June 2010 (1) May 2010 (2) April 2010 (1) March 2010 (1) December 2009 (1) November 2009 (1) April 2009 (1) July 2008 (2) April 2008 (1) January 2008 (2) November 2007 (1) August 2007 (1) July 2007 (1) June 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (1) January 2007 (1) December 2006 (2) November 2006 (1) October 2006 (1) September 2006 (1) August 2006 (2) July 2006 (3) June 2006 (2) January 2006 (2) December 2005 (1) March 2005 (1) November 2003 (1) June 2003 (1) December 2002 (1) May 2002 (1) January 2002 (1) October 2001 (1) December 2000 (1) July 1999 (1)